» Madaxweynaha Mali oo ku dhaawaqay Ra’iisul wasaare cusub
Guddoomiyaha Balcad ‘’Waxaa la kufsaday Xaaskeyga waxaana amar lagu bixiyay in la I Kharijiyo’’
Iran oo gacan weyn ka geysanaysa la dagaalanka burcad badeeda
Maamulka Banaadir State oo ka hadlay dagaalkii Balcad
Abuu Muscab oo ka hadlay dagaalo ay qaadeen
Wararkii ugu dambeeyay xaalada degmada Balcad
Madaxweynaha Mali oo ku dhaawaqay Ra’iisul wasaare cusub
Dec 12, 2012 - jawaab	Madaxweynaha kumeelka gaarka ee dalka Mali, Dioncounda Traore, ayaa soo magacaaba Ra’iisul wasaare cusub oo uu yeeshay dalkaasi Mali,kaasi oo badalaya Ra’iisul wasaarihii hore ee is casilay Sheikh Diarra.
Diango Sissoko ,ayaa maalintii shalay gelinkii dambe lagu dhawaaqay inuu yahay Ra’iisul wasaaraha dalkaasi Mali,inka yar 24 saac markii la xeray Ra’iisul wasaarihii hore ka dib markii uu isku dayay inuu ka baxsado dalka.
Afhayeen u hadlay ciidamada Afgambiga ku qabsaday dalkaasi Mali Bakary Mariko,ayaa sheegay iscasilaadii Diarra aysan aheyn natiijada rasmiga oo ay doonayeen.
Mariko ayaa sheegay in tani aysan ahayen Afgambi cusub isaga oo la hadlay Taleefishanka France 24.
Sidoo kale Afhayeenka ayaa sheegay in Diarra ay xereen Shalay ka dib markii uu isku dayay inuu dalka baxo wuxuuna xusay inay ku xereen xabsi guri sida uu hadalka u dhigay.
Madaxweynaha Kumeel gaarka ee Mali ayaa sheegay in dowlad cusub ay soo dhisayaan dhamaadka todobaadkaan sida uu sheegay.
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa cambaareeyay xiritaankii Sheikh Diarra Ra’iisul wasaarihii iscasilay.
Sheikh Diarra waxa uu ahaa Ra’iisul wasaare ku meel gaar ah waxii ka dambeeyay Bishii April.
« Warbixinta Ka HoreysayHorjooge C/Qadir”Qofkii u sacbiyo Faroole Diinta ayuu ka baxay+Dhagayso.	Warbixinta Xigto »Dad rayid ah oo lagu dilay Magaalada Hama ee dalkaasi Syria	Leave a Reply Cancel reply